kuyasebenza njani kwamanani ulawulo umatshini amancinci uhambe? - China Shandong New Ankai-Kitco
kuyasebenza njani kwamanani ulawulo umatshini amancinci uhambe?
Abantu abaninzi baqhelene ukusetyenziswa nokhowudo neenkqubo bomashini ukuhamba CNC encinane, kodwa lo mgaqo CNC umatshini nokuhamba akucacanga kakhulu. Ukuze ukwazi ukuqonda ngcono ulwazi olufanelekileyo, ndingathanda asinakukunika ulwaziso emfutshane namhlanje.
Ingaba umgaqo bomashini ezincinane ngamanani ulawulo ukuhamba ngendlela efanayo naleyo izixhobo umatshini CNC zemveli?
umatshini Small ulawulo ukuhamba wokwamanani, ingakumbi inkqubo machining namalungu amancinane ngqo zezindlu, kuba ngaphezu lwamanani ulawulo lathe zesiqhelo. Xa kuthelekiswa ne lathe eziqhelekileyo, isixhobo lwangaphakathi eshenxela ngaphakathi nangaphandle esqwini Z, kodwa izinto ithuthelwe kwibhokisi control yokuluka. Le spring collet ekhethekileyo kwibhokisi ulawulo Iqinisekile ukususa izinto emva naphambili. Lo mgaqo, ukusa kumkhamo omkhulu, kugqiba ukusebenza aphezulu i-NC kumatshini ukuhamba.
Uhlalutyo umgaqo ethile NC machine ukuhamba:
Emva kokuba uhlalutyo oluneenkcukacha zonke CNC baya ezincinane ngokwenene izinto zibe edibanise ngebhokisi yokuluka, ungasebenzisa i pre efakiweyo isikhokelo sleeve kumsebenzi esisigxina, khon 'ukuze kufikelelwe NC isixhobo umatshini jikelele ungenza ntoni ukuze izinto malunga X axis mobile kunye Y axis ulwalathiso kunye uthotho inkqubo ngqo, ungenza kakhulu izinto ekuveliseni ngexesha elinye-sukube.
Kwintshayelelo omtsha amancinci CNC aqikelele, kufuneka kuphela ukukholisa abasebenzi abanezakhono zobuchule ukuze zisebenze kumatshini CNC hamba, naye kufuneka ziqinisekise ukuba abasebenzi abachaphazelekayo kufuneka aqonde ngokupheleleyo ukusebenza imiyalelo ezintsha izixhobo malunga nokusetyenziswa kwemveliso, ngokuba abasebenzi abaninzi ubukhulu becala ukusuka amava obuchule, kuphela ukuqonda ngokupheleleyo imiyalelo ukusetyenziswa NC lwenzululwazi isengqiqweni, aqikelele.